रंगीन आगो - Colorants को लागि धातु धातु को कहाँ खोज्नुहोस
मैले रंगीन आगो बनाउन प्रयोग गरिने धातु लवणहरू कहाँ फेला पार्नको बारेमा जानकारीको लागि धेरै अनुरोधहरू पाएका छौं। यहाँ यी धातु लवहरूको सामान्य स्रोतहरूको सूची हो। यदि लवण तरल रूप मा हो भने, पीनकोन्स वा लगहरु लाई साबुन गर्नुहोस् वा जो पनि तरलमा जलाइन्छ र ईन्धनको उपयोग गर्नु पहिले सुत्न दिनुहोस्। यदि लवण ठोस हुन्छन् भने, तपाईंको सबैभन्दा राम्रो शर्त उनीहरु को एक सानो मा भङ्ग गर्न को लागी प्रयास गर्दछ र त्यसपछि आफ्नो आगो ईन्धन मा लागी।
तपाईं पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर लामो समय सुखाने समयको आशा गर्नुहुन्छ।
फायर रङ - स्रोत
हरियो - बोरिक एसिड सम्भवतः "हरी" को उत्तम स्रोत हो। बोरिक एसिडले प्राय: स्टोरको फार्मेसी सेक्शनमा डिस्पोजेक्टको रूपमा बेचेको छ। कपर सल्फेट अर्को धातुको नमक हो जुन हरी आगो हुन्छ । तपाईं तांबे सल्फेट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, सामान्यतया तरल रूप मा पतला हुन्छ, पूल वा तालाबमा अल्गा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने उत्पादनहरुमा।
सेतो - म्याग्नेशियम यौगिला सेतोमा ज्वाला रंग हल्काउन सक्छ। तपाईं Epsom लव थप्न सक्नुहुन्छ, जुन विभिन्न घरको उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। मैले सामान्यतया पसलका फार्मेसी सेक्शनमा बेचीएको इप्सम लिपि देख्नका लागि नुहाउनको लागि प्रयोग गरिरहेको छु, तर लवण सामान्यतया सोडियम अशुद्धता हुन्छ, जुन एक पहेंलो लौ उत्पादन गर्नेछ।
पहेंलो - तपाईंको सामान्य जगेडा पहेंलो पहेंलो हुने छ, तर यदि तपाईले ईंन्धनलाई जलाउनुभएको छ भने नीलो आगो उत्पादन गर्दछ, उदाहरणका लागि, तपाई सोडियम नमक जोडेर हरीमा पहेंलो देखि पहेँलो घुमाउनुहुन्छ, जस्तै साधारण टेबल नमक ।
सुन्तला - क्याल्कियम क्लोराइड सुन्तला आगोको उत्पादन गर्दछ। क्यालिसियम क्लोराइड बेईकलका रूपमा बिक्रि र सडक डे-इकिंग एजेन्टको रूपमा बेचीन्छ। बस यकीन गर्नुहोस् कि क्यालियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइडसँग मिल्दो छैन वा सोडियमबाट पहेँलो पहेलो क्यालोरीबाट सुन्तला थपिनेछ।
रातो - स्ट्रोन्टियम लवले रातो रङको आगो बनाउँछ।
स्ट्रोन्टियम प्राप्त गर्ने सबै भन्दा राम्ररी तरिका एक रातो आपातकालीन भित्ता खोल्न को लागी छ, जुन तपाई स्टोरको मोटर वाहन सेक्शनमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। सडक flares मा आफ्नो ईंधन र अक्सिडाइजर समावेश गर्दछ, यसैले यस सामग्रीले तीव्रता र धेरै उज्ज्वल जलायो। लिथियमले सुन्दर सुन्दर ज्वाला उत्पादन गर्दछ। तपाईं केहि लिथियम ब्याट्रीबाट लिथियम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
बैंगनी - बैंगनी वा बैजनी आगोमा पोटेशियम क्लोराइड थपेर उत्पादन गर्न सकिन्छ। पोटेशियम क्लोराइड किराना पसलको मसाले सेक्शनमा लाइट नमक वा नमक विकल्पको रुपमा बेचेको छ।
ब्लू - तपाईं तांबे क्लोराइड बाट नीलो आगो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म तापर क्लोराइडको व्यापक रूपमा उपलब्ध स्रोतको बारेमा जानकारी छैन। तपाईं मरिटिएट एसिड ( ढुवानी भण्डार निर्माणमा बेच्ने) मा तांबे को तार (सजिलै पत्ता लगाउन) घुमाएर यसको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक मात्र उल्टो प्रतिक्रिया हुनेछ र केहि चीजहरु जुन म वास्तव मा केहि रसायन विज्ञान अनुभव छैन जब सम्म तपाईं को सिफारिश गर्न को लागी नहीं ... तर यदि तपाईं निर्धारित गर्दै छन्, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को समाधान मा तांबा को एक टुकडा भंग एक निस्फोटक) जसमा तपाईले पर्याप्त म्यूरिटिक एसिड (हाइड्रोक्लोरिक एसिड) थप्नुभएको छ भने 5% एचएलसी समाधान गर्न।
कसरी एक अनप्रोड सीडी बुलबुला उभिन्छ
सजावटी चमक स्टिक लालटेन
कसरी एस्पिरिन एसिटाइलसेलसेलसेल एसिड बनाउने
साइन्स ग्याक्स र नर्सहरूको उपहार
ब्लेड रसायन विज्ञान चाल
घर का बना तरल नाइट्रोजन सिमुलेन्ट
शरीर तापमान फेयर प्रोजेक्टको लागि जानकारी
कसरी बेकिंग सोडा क्रिस्टल बढ्न।
कसरी घर बनाएर नेपल बनाउनुहोस्
रंगीन स्पार्कलरहरू कसरी बनाउने
साबुन कसरी बनाउने
गुलाब-हलिमन टेक्नोलॉजीको जीपीए, एसएटी र एक्ट डाटा
बेस्ट पर्वतारोहण दस्ताने प्रणाली
अनुवाद गर्न 'गर्न बिन' जब सन्दर्भमा सन्दर्भ गर्दै
गेटलिंग गनको इतिहास
बर्मा कहाँ छ?
तपाइँको क्यानाडा आयकरमा परिवर्तन कसरी परिवर्तन गर्छ?
संतिका कोसिस र डमियानलाई प्रार्थना
प्रत्येक देशमा जीवन प्रत्याशा
LEE - उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
रसायन विज्ञान मा एस्टर परिभाषा
इतिहास र Shawnee बर्तन संग्राहकहरुको उद्देश्य
जन्म चार्ट मा आगो तत्व
फर्न लाइभ साइकल
शीर्ष ग्राफाइट पेंसिल रेखाचित्र पेपर
ज्योतिष संग सुरु गर्दै
पुरातत्व: पुरातत्व जादू गर्न को लागि एक वैकल्पिक तरीका किन छ?
साउथ क्यारोलिना जीपीए विश्वविद्यालय, एसट र एक्ट डेटा
जापानी शब्द 'कुरु' (आउन) को लागी संकल्प र उदाहरणहरू
विश्वविद्यालयको नोट्रे डेम प्रवेश
कसरी ठूलो मानिसहरूको लागि स्केटबोर्डिङ मुद्दाहरू चिन्ने र अङ्क गर्ने
जापानी शब्द युयूमी सिक्नुहोस्
कफीले तपाईंलाई पूप बनाउँछ?